Sekoly mampianatra mozika : manamarika ny faha-15 taony ny CCHA | NewsMada
Sekoly mampianatra mozika : manamarika ny faha-15 taony ny CCHA
Cours de clavier Hery Andriatahina (CCHA). Efa 15 taona izay no nahenoana izany sekoly mampianatra mitendry « clavier » izany. Tsy handalo fotsiny ity tsingerintaona ity fa homarihina amin’ny hetsika samihafa, izay hosantarina amin’ny fotoam-pivavahana, ny 12 marsa izao.
Aorian’io fanokafana io, samy hanao hetsika ny CCHA any amin’ny faritra. Marihina fa, ankoatra an’Antananarivo, ahitana ity sekoly ity manomboka eo Behenjy, mandalo an’Ambatolampy, Ambohimandroso ary Antanifotsy. Zandriny indrindra ny any Antsirabe, niorina tamin’ny oktobra 2015.
Mametraka tanjona lehibe ny sekoly amin’ireo hetsika isam-paritra ireo, satria ny vola azo amin’izany, entina hananganana ny tsangambaton’ny tsingerintaona, araka ny fanazavan’ny talen’ny CCHA. Tsy inona moa izany tsangambato izany fa « studio » na toeram-pamerenan-kira sy famokarana hira.
Miisa 23 ny andiana mpianatra efa nivoaka tao amin’ny CCHA iray manontolo, tao anatin’izay 15 taona izay. Maharitra 18 volana ny fianarana, amin’ny ankapobeny, saingy mety ho fohy na ho lava noho io, arakaraka ny fahakingan’ny mpianatra sy ny fisian’ny fitaovana eo am-pelatanany, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra.
Mampiavaka ny sekoly ny famolavolany mpitendry zavamaneo any am-piangonana na mpitendry « variétés évangéliques » na hira ara-pilazantsara. « Fanirianay ny hoe ho lasa mpidera an’Andriamanitra avokoa ireo mpianatra mivoaka ato amin’ny sekoly », hoy ny taleny.